२८०१.५२ विन्दुमा नेप्से, ७ अर्ब ३७ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
मंसिर १, काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १६ दशमलव ९५ अंक बढेको छ ।
नेप्से परिसूचक २ हजार ८०१ दशमलव ५२ विन्दुमा पुगेको हो । यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२४ धितोपत्रको १ करोड १९ लाख ४३ हजार ८५८ कित्ता शेयरको ७७ हजार ५१८ पटकमा रू. ७ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख ४६ हजार ८२० बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कारोबारमा आएका २२४ धितोपत्रमध्ये चार ओटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत र माुनषी लघुवित्त वित्तीय संस्था र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी शेयरमूल्य बोटलर्स नेपाल तराईको घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ७ दशमलव ४७ प्रतिशत घटेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १३ हजार १ मा झरेको हो ।
दास्रोमा महालक्ष्मी विकास बैंकको शेयरमूल्य ७ दशमलव ४१ प्रतिशत घटेर रू. ७६२ मा झरेको छ । त्यसैगरी सार्वधिक शेयर खरीदविक्री नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रू.५८ करोड ६८ लाख ६२ हजार बराबरको भएको छ । दोस्रोमा महालक्ष्मी विकास बैंकको रू. ३८ करोड ५६ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ समूह मध्ये सात समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेको हो । सबैभन्दा बढी अन्य समूहको परिसूचक ५ दशमलव २९ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यसैगरी बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव २६ प्रतिशत, व्यापार समूहको शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजम समूहको १ दशमलव ५३ प्रतिशत, हाइड्रोपावर समूहको २ दशमलव २४ प्रतिशत, वित्त समूहको १ दशमलव २२ प्रतिशत र माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
समूहगत परिसूचक घट्नेमा विकास बैंक समूहको परिसूचक १ दशमलव ३५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव ५२ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव १४ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ ।
बुधवार अल्पकालिन लगानीकर्ताले प्रोफिट बुक गरेका छन् । सोही कारण इन्ट्राडेमा २ हजार ८२४ विन्दुसम्म पुगेको बजार २ हजार ८०० विन्दुमा आएर अडिएको छ ।
कारोबारको पहिलो दिनमै न्यादी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट[२०७८ मंसिर, १३]
एनएमबि फिप्टीसहित ५ ओटा धितोपत्रमा उच्च खरीद माग[२०७८ मंसिर, १३]
महालक्ष्मी विकास बैंकको सर्वाधिक रू. १७ करोड ४८ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री [२०७८ मंसिर, १३]